မင်းနိုင်အောင်: နာဂ လူမျိုးများအကြောင်း
မြန်မာ နိုင်ငံ ၌ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ် စုပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိသည့် အနက် အချို့ မှာ ထူးခြား လေးနက် သော သဘာဝ ရှိပြီး တောင်တန်း နေ မျိုးနွယ် စု များ ၏ ပကတိ ဘ၀ ပုံရိပ် များ မှာ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်း လှပါ သည်။ နာဂ တိုင်းရင်းသား များသည် ချင်း ပြည်နယ် ဆွမ်မရ တောင်တန်း ဒေသ နှင့် မြန်မာပြည် မြောက်ဖျား ပိုင်း တောင်ကုန်း ထူထပ်ရာ ဒေသ များ တွင် နာဂ လူမျိုးစု များ ပြန့်ကျဲစွာ နေထိုင် ကြသည်။ ခေတ်ဟောင်း မြန်မာ ရာဇဝင် (ဒေါက်တာ သန်းထွန်း) စာမျက်နှာ ၂၈ လူမျိုး နွယ် စု ဆင်းသက် ပုံ အရ တိဗက် အာသံ မြန်မာ မျိုးနွယ် စု ဖြစ်သည်။ နာဂ လူမျိုး များ မွေးဖွား လာလျှင် မိဘ များက ယောကျာ်း ဆို ဓားတစ်လက် လှံ တစ်လက်၊ မိန်း ကလေး ဆို ပုတီး လက်ကောက်တွေ လုပ်ပေးပြီး ရိုးရာ သီချင်းတွေ၊ အက တွေ သင်ပေး ကြသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက် စပါးရိတ် သိမ်းပြီး ချိန် တွင် ကောက်သစ် စားပွဲ ကျင်း ပလေ့ ရှိသည်။ ကောက်သစ် စားပွဲ တွင် ရွာထဲက တိရစ္ဆာန် မဟုတ်ဘဲ တောကောင် လိုက်ပြီး ဧည့်သည် များကို ဧည့်ခံ ကျွေးမွေး ကြောင်း သိရသည်။
နာဂ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်
နာဂ နှစ်သစ်ကူး ရိုးရာ ပွဲတော် ကို စစ်ကိုင်း တိုင်း တွင် ကျင်းပ ပြီး နောက် ချင်း ပြည်နယ် တွင် ဆက်လက် ကျင်းပ ကြသည်။ စစ်ကိုင်း တိုင်း တွင် ကျင်းပ သော မြို့နယ် များမှာ ခန္တီး၊ လေရှီး၊ လဟယ်နှင့် နန်းယွန်း မြ်ို့နယ် တို့ ဖြစ်သည်။ နာဂ နှစ်သစ် ကူး ရိုးရာ ပွဲတော် သည် လူမှုရေး ပွဲတော် ဖြစ်ပြီး ကုန်လွန် ခဲ့သော နှစ် တစ်နှစ် က အတွေ့ အကြုံ များ ကို ဖလှယ် ရန် နှင့် လာမည့် နှစ်သစ် တွင် တွေ့ကြုံ နိုင်သော အခက် အခဲများ ကို ကြိုတင် ဖြေရှင်း ရန် ကောင်းမွန် သော စီမံကိန်း များ ချမှတ် နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ၍ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပွဲတော် တွင် လာမည့် နှစ်တွင် သီးနှံများ တိုးတက် ဖြစ်ထွန်း ၍ ရာသီ ဥတု ကောင်းမွန်ရန် နှင့် အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန် များ ရောဂါဘယ ကင်းဝေး စေရန် ဆုမွန် ကောင်းများ တောင်းကြ သည်။
နာဂ ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် သို့ နာဂ တိုင်းရင်းသား များနေထိုင်သော ရနိုင် တောင်တန်း၊ မုတ် တောင်တန်း၊ ပတ်ကွိုင် တောင်တန်း၊ ဟူး ကောင်း တောင်တန်း၊ ခန္တီးခရိုင် နယ်စပ် ရှိ နာဂ တိုင်းရင်းသား များ ပါ ခန္တီး ခရိုင် နန်းယွန်း မြို့ရှိ နာဂ ရိုးရာ ပွဲတော် သို့ တက်ရောက် ကြ ကြောင်း သိရသည်။ နန်းယွန်း မြို့နယ် နှင့် ထိစပ် နေသော လိတ်နိုချောင်း၊ ဟာနူးချောင်း၊ နောင်ယန်း အင်းနှင့် နောင်ဆိုင် အင်း တို့၌ နေထိုင် သော နာဂ တိုင်းရင်းသား များပါ တက်ရောက် သဖြင့် နာဂရိုးရာ ပွဲတော် သည် အလွန်ပင် စည်ကား သည်။
နာဂ တိုင်းရင်းသား များ သည် အစဉ်အမြဲ ကျင်းပ ပြုလုပ် သော ပွဲတော် ဖြစ် သည့် နာဂ ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် ကို နှစ်စဉ် ဇန်န၀ါရီ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပ သည်။ နာဂ တိုင်းရင်း သားများ ပြန်လည် ဆုံ တွေ့သော ပွဲတော် ဖြစ်သည့် အတွက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အမှတ် တရ အဖြစ် ကြက်၊ ငှက်၊ ၀က်၊ကျွဲ၊ နွား နှင့် နွားနောက် တို့ အပြင် ကိုယ်တိုင် ရက်လုပ် ထားသည့် ခြုံစောင်၊ လက် ရက်ခြင်း၊ ကြိမ်ကွင်း၊ ငွေ ကွင်းစသည် တို့ကို လည်း လက်ဆောင် အဖြစ် ပွဲတော် ကာလ အတွင်း လဲလှယ် ကြသည်။
ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင် ပေးရာ တွင် ကြီး မားပြီး သယ်ဆောင် ရာ တွင် မလွယ်သော ကျွဲ၊ နွားများ ကို ငွေကြေး တန်ဖိုး ဖြင့် သတ်မှတ် ပြီး ပေး အပ်ခြင်း ကို နာဂ လူကြီး က ရှင်းပြ ၍ သိရ သည်။ ထို့ အပြင် နာဂ မျိုးနွယ်စု များ၏ ကောက်စိုက် ပွဲတော် ကောက်ရိတ် ပွဲတော် တို့ကို လည်း အစဉ် အလာ မပျက် ကျင်းပ ကြကြောင်း သိရသည်။
နာဂ တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင် သော တောင်တန်း တောင်ကုန်း များသည် စုစု ပေါင်း ဧရိယာ စတုရန်း မိုင်ပေါင် ၂,၅၅၅ ကျော် ကျယ်ဝန်း ကြောင်း သိရ သည်။
နာဂရိုး ရာ ပစ္စည်း များ
နာဂ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု များ၏ နာဂ ရိုးရာ ပစ္စည်းများ ကို ခန္တီး မြို့ ၊ ဇီးဖြူ ကုန်းရပ် ရှိ လေယာဉ် ကွင်း သွား ကားလမ်း တွင် ပြတိုက် အဖြစ် ဖွင့်လှစ် ပြသ ထားကြောင်း သိရသည်။ ခန္တီး မြို့မှာ ကန်ဇင်းပင် များ ပေါက်သော နေရာ တွင် ရွာတည် ခဲ့ရာမှ ဖြစ်ပေါ် လာသော အမည် ဖြစ်ပြီး ဇန်းခူးရိန် မှ ဇင်္ဂလိန်း ရွာ အဖြစ် ဇင်္ဂလိန်း နာဂ လူမျိုးစု များ က တည်ထောင် ခဲ့ကြ သည်။ လက်ရှိ ခန္တီးမြို့ မှာ ရှေး အခါ က ဇင်္ဂလိန်း နာဂ နေသူများ တည်ထောင် ခဲ့ကြောင်း ခန္တီး သမိုင်း မှတ်တမ်း များမှာ တွေ့ရ သည်။ ခန္တီး၊ လဟယ်၊ လေရှီး၊ နန်းယွန်း မြို့နယ် များမှာ တောင်ပေါ် နေ နာဂ တိုင်းရင်းသား များ ၏ ဒေသ ဖြစ်သဖြင့် နာဂ တောင်တန်း ဒေသ ဟု လူသိ များ ခဲ့သည်။
“ပယင်း နားရောင်း၊ ပယင်း လည်ဆွဲ၊ သန္တာပုတီး၊ ကျားစွယ် တွေက ခန္တီးမြို့ ဦးပိုင်း ကတွေ့တဲ့ နာဂ ရိုးရာ ပစ္စည်းတွေ ပါ။ နာဂ မြေအိုး၊ နာဂ ကြေး လက်ကောက် တွေက ကတိုး နဲ့ စိန်နန်း ရွာ စေတီပျက် တွေ ထဲကတွေ့ တဲ့ ပစ္စည်း တွေပါ။ နာဂ ပယင်း နားရောင်း၊ ပုတီး ရောင်စုံ၊ နာဂ ကြေး လက်ကောက် နဲ့ ငွေဒင်္ဂါး တွေက ထမံသီ ဘက်က တွေ့တာပါ။ နာဂ လူမျိုး တွေဟာ ရှေး ကတည်း က ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ပြိုပျက် သွားတဲ့ ဘုရား တွေမှာ ဋ္ဌာပနာ ထဲက ရရှိတဲ့ နာဂ ရိုးရာ ပစ္စည်းတွေ ကြည့် တာနဲ့ သိနိုင် ပါတယ်” ဟု ပြတိုက် တာဝန်ရှိ သူ နာဂ အမျိုးသား ဦးကိုင်လုံ က ပြောသည်။နာဂ ရိုးရာ ပြတိုက် တွင် နာဂ လှံများ၊ ပုဆိန် များ၊ ဓားနှင့် ပေါက်ပြား များ၊ ရိုးရာ သုံး အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း မျိုးစုံ ခင်းကျင်း ပြသ ထားရာ ခန္တီး မြို့သို့ လာရောက် သူများ ဝင်ရောက် လေ့လာ ကြည့်ရှု နိုင်သည်။
ယခု အခါ နာဂ တောင်တန်း ဒေသ တွင် နောက်အော်၊ လိုင်းနောင်၊ ပုံညို၊ လောင် တိန်၊ ပိန်းကူး၊ ရောင်ကွန်၊ တိုက်တီး၊ ကျမ်း၊ တန်ကွန်၊ လော၊ ပါရာ၊ မကူတီ၊ ကားရော၊ ဟိုင်းမြေ စသော မျိုးနွယ်စု ခွဲပေါင်း ၅၇ မျိုး ရှိပြီး နာဂ တိုင်းရင်းသား လူဦးရေ ၂ သိန်း နီးပါး ရှိပြီး နာဂ လူမျိုး အများစု သည် စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသ ကြီး ခန္တီး မြို့နယ်၊ ဟုမ္မလင်း မြို့နယ်၊ လေရှီး မြို့နယ်၊ လဟယ် မြို့နယ်၊ နန်းယွန်း မြို့နယ် တို့တွင် နေထိုင် ကြသည်။
posted by မင်းနိုင်အောင် at 18:33
Naga People live only in Sagaing Region not in Chin State.
Our Naga people celebrated our festival only in our land, never celebrated in Chin State.
10 October 2015 at 07:23
creditပေးပြီး မျှဝေပါရစေ ခင်ဗျာ
14 June 2016 at 23:25
ပုဂံသမိုင်းမျက်နှာစာ ပေါ် က အနော်ရထာ